IKHADI LINE - Ningbo Zhongtong Electrical Co., Ltd
TE yokuNxibelelanisa Ltd. i dollar kwezobuchwepheshe ehlabathini-billion emininzi. Connectivity sensor izisombululo Le nkampani zibalulekile kwihlabathi eliya enxulumene lanamhlanje. TE uyasebenzisana iinjineli ukuba uguqule amagama zibe indalo - acace oko kunokwenzeka usebenzisa iimveliso ezikrelekrele, ngempumelelo yaye eziphakamileyo eziqhuba TE kunye nezisombululo kubonakele kwiindawo ngqwabalala. Amaqabane TE nabaxumi kumazwe angaphezu 150 kuluhlu olubanzi mveliso. YONKE Connection Ubala.
Molex , eyasekwa ngo-1938, yenye abenzi inkulu jikelele ehlabathini ngayo iimveliso mninzi. Molex udala izisombululo ezintsha ovele izihlanganisi ngocingo-to-ucingo, ucingo-to-Yodi, kwaye ibhodi-to-Yodi, kuquka header, backplane, terminal, Telecom, ethernet, kunye intambo, ngokunjalo isicelo tooling. Imizamo Molex ukuba ukunciphisa iimpembelelo zokusingqongileyo imicimbi, iimveliso, kunye neenkonzo ziboniswe ukuzinikela kwabo inkqubo yabo yokulawula okusingqongileyo, ECOCARE.
jst ubonelela iintlobo ngeentlobo iinkqubo uqhagamshelo kweentambo yokubopha esenzelwe ngokukodwa kwicandelo kwimarike ngomatshini. Jst yenza umahluko ovela kwezinye asendle ngokubonelela iinkqubo uqhagamshelo esikwenza ngaphezulu imigangatho kushishino isihlobo ukuba ilingane, uhlobo kunye nomsebenzi. Iimveliso jst zifumaneka kuzo zonke izicelo kwinkqubo izithuthi lonke OEM umgca yonke imoto kwihlabathi. Ngokukhetha inkqubo uqhagamshelwano jst wena usisiqinisekiso impumelelo kuzo zonke iinkalo inqubo yakho design and lokuvelisa
Hirose Electric Inkampani Igxininisa ekwenziweni izihlanganisi yaye kube negalelo kuphuhliso lwecandelo elektroniki iminyaka engaphezu kwama-70. Ukuthobeka ifilosofi soshishino ukufuna ubulumko yonke imithombo kwaye abandakanya olo lwazi ukugcina umgangatho ophezulu, kunye negalelo elibonakalayo ayisebenzeleyo Hirose onyanisekileyo isiseko sabathengi. Hirose kwakhona nozimiseleyo nemiba yokusingqongileyo ekwenziweni izihlanganisi ezifana izihlanganisi yafakwa, izihlanganisi FFC / FPC, nezidibanisi kumqolo omnye kunye kabini.
Bosch Devices unxibelelene Solutions , umncedisi ephethwe ngokupheleleyo Robert Bosch GmbH, phuhlisa aze ezahlukeneyo izixhobo ezintsha ezidityanisiweyo kunye nezisombululo zenzelwe ukuba kwi Internet Izinto (IoT). Bosch Devices unxibelelene Solutions unika iimveliso compact elektroniki kunye nobuchule software ezenza izixhobo kunye nezinto ezikrelekrele kunye web-enabled.
Ugcino Connection Systems eliyinkokeli ehlabathini ekukhutshweni electric isithuthi kunye neenkqubo ukusasazwa ngekhompyutha, kunye igama nanto kuyilo, uphuhliso, kunye nokuveliswa kweenkqubo uqhagamshelwano lombane kunye elektronikhi kunye nezixhobo. Iminyaka engaphezu kwama-100, Ugcino ijolise ekuboneleleni yokusebenza enkulu imveliso kunye nokuqhuba ubugcisa langomso. Packard Electric obafunyanwa Ugcino Systems lokqhagam kwi-1995.
Yazaki Corporation alicandelo izithuthi owasekwa ngo-1941, umenzi ezizimeleyo kunye bencokola wire izithuthi, imveliso yethu ezingundoqo, nabe nisaya nenxaxheba ephambili kurhwebo lwehlabathi, siphuhlisa kunye neemitha ukwenziwa, amacandelo elektroniki kunye nezinye iimveliso for Automotive ukuyisebenzisa.
Sumitomo eNgcingo Systems kudlala indima ekudaleni uluntu echumayo ubugcisa ophezulu kunye nomgangatho imveliso.
Bencokola ephathelene izithuthi, ishishini lethu ongundoqo, ukuba isithuthi electric kunye namacandelo ezimotweni, amacandelo elektroniki nangaphezulu, sinika imveliso ukukhawulelana neemfuno ubudala.